. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ကိုဖိုးစိန် မွေးနေ့ အမှတ်တရ
ကွန်ပျူတာကို ဖွင့် .. ဂျီတော့ကိုဝင်ပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောဖြစ်သေးပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တယောက်တည်း အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့အချိန် တတုန်တုန်နဲ့ တက်လာလို့ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုစူပုတ်နေပြီး စိတ်ကောက်နေတဲ့ ကိုဖိုးစိန်တယောက်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ် .. (စူပုတ်ပြီး စိတ်ကောက်နေပြီဆိုတာကို ဂျီတော့မှာ တက်လာတဲ့စာကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ် ..)
အမြဲတမ်း ပြောတတ်တာက .. (မခေါ်ဘူးလား .. မခေါ်ဘူးပေါ့ .. ရပါတယ် ..) (ပျော်လာကြတယ်ပေါ့ .. မနာလိုဘူး .. စိတ်ဆိုးဒယ် ..) (မခေါ်ဘူး ..) (စိမ်းကားသူဂျီး..) စိတ်ကောင်းလေးဝင်ပြီး စခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ (ညီမ ပူတူတူးလေး .. မိုးမိုး ချိုချဉ်စပ်ခါးလေး ..) အဲဒါကိုမှ စကားပြန်မပြောဖြစ်ဘူးဆိုရင် (မခေါ်ဘူးလားးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ..) အာခေါင်ခြစ်အော်ပုံရပါတယ် .. ကျန်သေးတယ် ရေးရင် အဲဒါနဲ့ပဲ ပို့စ်တခု ပြည့်သွားနိုင်ပါတယ် :D
မောင်နှမ များရဲ့ အချစ်တော်ကြီး အကိုဂျီး ကိုဖိုးစိန်
အစွံထုတ်ရန် ရှိသည် .. :P
မိုးခါးတို့ တွေ့ကြတယ် ဆုံကြတယ် ခင်မင်ကြတယ် .. ခင်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိုးခါးအတွေးကတော့ အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး .. တယောက်နဲ့တယောက် တယောက်အကြောင်း တယောက် ၀င်ရောက်ခံစား ကိုယ်ချင်းစာပေးနိုင်မယ် .. နားလည်ပေးနိုင်မယ် .. အပြန်အလှန် ကူညီဖေးမမှုတွေ ပေးနိုင်မယ် .. (ကူညီဖေးမတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ စကားလုံးလေး တလုံးကလည်း အတိုင်း အတာ တခုအထိ ထိရောက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..) စစခင်ချင်းမှာ လူတွေ ၄ ၅ ၁၀ ယောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် .. နောက် အချိန် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နီးစပ်သူ .. ခံစားချက် ခံယူချက် နီးစပ်သူချင်း ပိုမိုရင်းနှီးသွားတတ်တာ သဘာဝပါ .. ခင်တာချင်းတူရင်တောင် ရင်းနှီးတဲ့စိတ်ခံစားမှုချင်း ကွာဟနိုင်ပါတယ် ..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ကြပြီ ဆုံကြပြီ ခင်လည်း ခင်မင်ကြပြီးပြီဆိုရင် နောက်ဆုံးချိန်ထိ ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲသွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းလည်း ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ .. ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေ ..း)
ရေးသားသူ မိုးခါး at 7/22/2009 01:13:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ အမှတ်တရ, မွေးနေ့